Top 10 các loại hoa Tết cực may mắn nên có trong nhà | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Top 10 các loại hoa Tết cực may mắn nên có trong nhà | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Ngeentsuku zokugqibela zalo nyaka, iintsapho zaseVietnam zixakekile zithenga iintyatyambo ukuze zibhiyozele uNyaka oMtsha, kodwa abantu abaninzi basabhidekile xa bekhetha iintyatyambo ezifanelekileyo ukuba bazibonise ekhayeni labo. Iintyatyambo ezitsha ngoMhla woNyaka omtsha zihlala zithetha ithamsanqa kwaye zizise ukuchuma kumniniyo. Ngezantsi, iintyatyambo eziNtsha ezingama-360 ziya kudwelisa iintyatyambo ezili-10 ezinethamsanqa kakhulu zeTet zokuba nazo endlwini.
1 Intsingiselo yeentyatyambo kwiholide yeTet
2 Zeziphi iintyatyambo ezinethamsanqa kuTet?
2.1 1. Intyatyambo yePlum
2.2 2. Intyatyambo yePesika
2.3 3. Intyatyambo yeCat Tuong
2.4 4. IiDaisies Chrysanthemums
2.5 5. IiChrysanthemums
2.6 6. IiMarigolds
2.7 7. Iintyatyambo zeRosehip
2.8 8 . Orchid
2.9 9. Hoa Don (Hue Ta)
2.10 10. I-Lily
3 Iipateni zeentyatyambo ezintle kakhulu zithandwa kwiholide yeTet
4 Ixabiso leentyatyambo zeTet ngo-2019
5 Kuphi ukuthenga iintyatyambo ezintle zeTet?
Intsingiselo yeentyatyambo kwiholide yeTet
Iintyatyambo ezintle ngeholide yeTet zithengiswa kakhulu kwiigadi nakwiimarike
Iintyatyambo zizinto eziyimfuneko kwiholide yeTet yaseVietnam. Ukongezelela ekuhombiseni, nabo banentsingiselo yabo abaninimzi abafuna ukuyidlulisela, ngethemba loNyaka omtsha ozayo.Uhlobo ngalunye lweentyatyambo lunentsingiselo, umyalezo olungileyo kumnini.. Iintyatyambo ezintle kwiholide yeTet zithengiswa kakhulu kwiigadi kunye neemarike ukuba ukhethe kuzo. Uqonde konke malunga Intsingiselo yeentyatyambo kwiholide yeTet hayi ngoku?
Zeziphi iintyatyambo ezinethamsanqa kuTet?
Unokukhetha okuninzi kweentyatyambo kwiholide yeTet
Nawuphi na umninikhaya unqwenela uNyaka oMtsha onoxolo, owonwabileyo kunye nethamsanqa, ngoko ke ukubonisa iintyatyambo ezintsha ngethamsanqa kubaluleke kakhulu ngexesha leholide yeTet. Ungakhetha Iintyatyambo zeholide yeTet intle Iintyatyambo ezityalwe ngeholide yeTet Ukuba ufuna isitiya sakho sasekhaya sibe namandla ngakumbi kwaye sidlamke. Masifunde malunga ne-10 Intyatyambo ethandwayo kwiholide yeTet Ndiyacela!
1. Intyatyambo yePlum
Le ntyatyambo i-apricot entle yeTet ithandwa kakhulu eMzantsi welizwe lethu.
Kusentwasahlobo kuphela apho iintyatyambo zeapilkosi zidubula ngotyheli oqaqambileyo. Iintlobo iintyatyambo ezintle ukwamkela uTet Oku kuqhelekile eMzantsi welizwe lethu. Kwizithethe zaseVietnam, iintyatyambo zeapricot zibonisa intwasahlobo, inhlanhla kunye nolonwabo. I-Plum blossom ikwangumqondiso wokunyaniseka eluthandweni kuba idubula ngexesha entwasahlobo. Ngoko ke, iintyatyambo ze-apricot zinikwe umsebenzi obaluleke kakhulu kwindalo, okukhumbuza intwasahlobo ukuba ifike ngexesha. Ukongezelela, ukunika omnye umntu isebe leapilkosi okanye imbiza yeentyatyambo zeapilkosi yimbonakaliso yomnqweno wokufuna ubuhlobo obuhlala buhleli.
Bona Ngakumbi: Iintyatyambo ezingama-200 eziNtofontofo
2. Intyatyambo yePesika
Iintyatyambo zePeach kwiTet iholide iyaqhakaza entwasahlobo, ebonisa ithamsanqa
Intyatyambo yepesika ithandwa kakhulu kuMantla welizwe lethu nakwimimandla ebandayo. Iindidi zeentyatyambo zeholide yeTet Le ntyatyambo idubula entwasahlobo, ifanekisela ithamsanqa, ulonwabo, ubuhlobo obusondeleyo kunye nobudlelwane obuhlala buhleli. Ukugcina umthi wepesika endlwini okanye uwunike umntu omthandayo yimbonakaliso yeminqweno yobomi obuhle, ulonwabo olugqibeleleyo, uvuyo noxolo.
3. Intyatyambo yeCat Tuong
Ikati iTuong yintyatyambo edumileyo kwiholide yeTet
“Ikati Tuong” – igama livakala njengenenekazi kakhulu. Iintyatyambo azikhazimli kodwa zikhupha ubuhle obuswiti, obunothando nobuhle. Ikati uTuong Intyatyambo ethandwayo kwiholide yeTet ithandwa kakhulu ngabantu baseJapan ngakumbi kunye nama-Asiya ngokubanzi.
4. IiDaisies Chrysanthemums
I-Gerbera Chrysanthemums ibonisa uvuyo kunye nolonwabo
Daisies Chrysanthemums okanye “Iingqekembe” ngokufutshane, zifanekisela uvuyo kunye nemihlali. Yenza iintlobo zeentyatyambo kwiholide yeTet endlwini okanye ukunika i-bouquet ye-gerberas yenzelwe ukuzisa ithemba, kunye nomyalezo othi “kholelwa ukuba kuya kuba”.
Bona Ngakumbi: Iipateni ezingama-30 zeeNkozo zeLucky
I-Chrysanthemum yenye yeentyatyambo zeTet ezidumileyo namhlanje
I-Chrysanthemum yeyona ntyatyambo ilandelayo idumileyo emva kwentyatyambo yeapilkosi kunye nepesika. Ngokutsho kwabantu kunye ne-feng shui, i-chrysanthemum yintyatyambo ezisa ulonwabo kunye novuyo kumnini. Abantu bahlala bebonisa i-chrysanthemums endlwini ukuqokelela ubutyebi obuninzi. Le yenye ye iintyatyambo ezithengiswa kakhulu kwiholide yeTet eyona idumileyo namhlanje. Ngokukodwa, abantu abaninzi bakholelwa ukuba, ukuba ubeka i-Cuc kwindawo eqaqambileyo, ukufumana ukukhanya kwelanga, ukwenza i-Cuc ikhanyise, intsikelelo iya kuba yomelele.
UVan Tho chrysanthemum uhlala esetyenziswa njengentyatyambo entle kakhulu kwisibingelelo ngeholide yeTet kwi feng shui.
Ngokunyanisekileyo kwigama layo, iintyatyambo zaseMarigold zibekwe endlwini, ngaphandle kwe-alley ngexesha leTet kunye neminqweno yempilo, uxolo kunye nokuphila ixesha elide. Ngokuqhelekileyo isetyenziswa njenge iintyatyambo zesibingelelo kwiholide yeTet Kuhle kakhulu kwi-feng shui. Ngaphezu koko, le yintyatyambo enevumba elimyoli eligxotha ngempumelelo iimpukane, iingcongconi nezinambuzane.
7. Iintyatyambo zeRosehip
I-Rosemary buds ligama lohlobo lwentyatyambo ebonakaliswe kwisiganeko soNyaka oMtsha waseLunar
Le yintyatyambo ezisa ukuchuma. Intsingiselo izele yinzala, ithamsanqa liya kuzala kunyaka omtsha. I-Rosehip buds idayiwe ngentaphane yemibala egqamileyo kwaye ithengiswa ngokwemiqulu okanye kwiivazi. Ngaba enye ye Iintyatyambo ezithengiswa kakhulu ngexesha leTetithandwa ngabantu abavela kuMantla ukuya eMzantsi ngeendlela ezininzi zokuhombisa.
8 . Orchid
I-Orchids zezona ntyatyambo zintle kunye nezitofotofo zeTet ezihombisa ikhaya lomniniyo
Ukususela kwixesha elidlulileyo, i-Lan isaziwa njengentyatyambo ehloniphekileyo, intyatyambo yookumkani be-regal. Iiorchids zaseVietnam zineentlobo ezininzi kwaye zineentsingiselo ezininzi. Ngokukodwa, iiorchids kudala zigqalwa njengewonga nembeko kumakhulukhulu eentlobo zeeorchids. Ngaphandle koko, ikwafuzisela ubumsulwa nobunyulu. I-Orchids ziintyatyambo ezahlukeneyo ngokweentlobo kunye nemibala, enika abasebenzisi ukhetho oluninzi. I-Orchid, ukongeza kwimbonakalo yayo entle, ifanekisela ubunewunewu. Ikwanayo nentsingiselo yendoda enesidima, ubuqili. Ukuba Ezona ntyatyambo zintle zeTet Ubunewunewu obugqithisileyo obuhombisa ikhaya lomnini.
Inqaku elinye lokuba ii-orchids zinokuboniswa endlwini, kodwa zikhawulelwe kwisibingelelo sokhokho kuba, ngokwembono ethile, ii-orchids ziintyatyambo ezithwala ivumba lothando.
Bona Ngakumbi: Iintlobo ezingama-40 zeOrchid eziMhlophe
9. Hoa Don (Hue Ta)
Iinyibiba zethu zifanelekile njengeentyatyambo zesibingelelo kwiholide yeTet
Iintyatyambo ezimibalabala ezinemibala emininzi zihlala zidityaniswe nezinye iintyatyambo ezininzi ukuze zinikwe kwizibingelelo zezinyanya ngeeholide ezinkulu ezifana neVu Lan, Tet… Abantu bayayithanda le ntyatyambo kuba inendalo enyulu rhoqo. kwaye ihlala ixesha elide. Ngaphandle koko, kwinyibiba, kukho igama elithi “Hue”, ngoko abantu bacinga ngokukhawuleza igama elithi ubabalo, ukuze babonise ukunyaniseka kwabo kunye nombulelo kwizinyanya zabo kwaye bathandazele iintsikelelo. Ifanelekile ukwenza iintyatyambo zesibingelelo kwiholide yeTet.
ULily yintyatyambo entle kaTet enevumba elimnandi
ULily ngu iintyatyambo ezintle zeTet inevumba elimnandi, inkangeleko entle kakhulu kwaye inemibala emininzi emhlophe, ebomvu, e-orenji tyheli…. Kutshanje, abantu bathanda iinyibiba ezimibalabala, iintyatyambo ezinkulu kunye neembiza ezilungele ukutyalwa ngenxa yexesha. . Iglasi ebomvu eqaqambileyo enombala ufuzisela ithamsanqa, unethamsanqa. Iinyibiba ezimhlophe zizisa ubuhle nyulu, ibha ephezulu, baya kuba lukhetho oluhle kuwe xa ufuna unyaka omtsha wenhlanhla kunye nempumelelo emsebenzini. Nangona kunjalo, kusekho izimvo ekungafanelanga ukuba zibonise uLy kwiholide yeTet kuba zibonisa ukwahlukana.
Bona Okungakumbi: Iipateni ezingama-30 zeLily zoSuku loNyaka oMtsha
Iipateni zeentyatyambo ezintle kakhulu zithandwa kwiholide yeTet
Umculo waseNtwasahlobo ngowona mxholo wembiza yentyatyambo yeTet intle – Rosebuds
Umculo wasentwasahlobo ngumxholo weembiza Eyona ntyatyambo intle yeTet – I-Red Rosehip buds ibonisa imibala eqaqambileyo. Ihonjiswe ngamaqhina kunye nezixhobo. NgoMhla woNyaka oMtsha, indlu igqamile kwaye intle, ecaleni kwengoma yasentwasahlobo ephithizelayo, amasebe eapilkosi atyheli kunye namasebe epesika amatsha ngokuqinisekileyo aya kuba yimfuneko kwivazi yeSpring Buds. Ngaphandle kwamanqaku entwasahlobo angxolayo, i-vase ye-rosebuds ihombisa indawo yekhaya lakho ngochulumanco, ngokuchwayita nangovuyo. Ukuthembisa ithemba elininzi kunye nethamsanqa kunyaka omtsha.
I-vase ye-rosehip-intwasahlobo yam
I-Rosehip Flower Vase-Intwasahlobo yam ityalwe kwi-golden rosehip buds ebekwe kwimbiza emhlophe ye-porcelain, ezantsi komlomo wevasi kukho isaphetha segolide esidityaniswe ne-rosebuds. Yenze ubuhle obuthambileyo, obukhethekileyo kunye nobunomtsalane. Beka ivasi yeentyatyambo kwigumbi lokuhlala, intwasahlobo yam iqaqambile kwaye yonwabile. Yiza nesithuba esizaliswe nemibala yasentwasahlobo ukuzisa amathamsanqa amaninzi kunyaka omtsha. Yiba Iintyatyambo kwiivazi kwiholide yeTet Ngalomzuzu, intliziyo yam ibuthanda ngokwenene ubomi kwaye yonwabile, ichulumancile kwaye ayiphumli emphefumlweni wam.
Ubutofotofo bembiza yeorchid emhlophe yeholide yeTet
I-orchid ecocekileyo ecocekileyo isebutofotofo ngokulinganayo, intle kwaye inomtsalane, ngoko ifanelekile kakhulu ukuhombisa indawo yokutyela ekumgangatho ophezulu kunye neendawo zehotele. Ezikhulu kakhulu, iipetali ezimhlophe ezibukekayo nazo zifanelekile njengesipho sosuku lokuzalwa, kodwa sivuyisana ngokuvula kwaye Iintyatyambo ezithengiswa kakhulu kwiholide yeTet.
Imbiza yeeorchids ezimfusa-intyatyambo ethandwayo kwiholide yeTet
Namhlanje, ukwenza Iiorchids ezimfusa ngokukodwa kunye neeorchids ngokubanzi ziye zaziwa kakhulu kwiintsapho ngexesha leTet ukuya eNtwasahlobo. Imbiza yeeorchids ezimfusa – lIntyatyambo ethandwayo kwiholide yeTet Kuya kuzisa imvisiswano kwi-feng shui kwaye izise inhlanhla kumnini
Bona Ngakumbi: IiBuds zeRosehip ezinomtsalane kuNyaka oMtsha wangaphambi koBusuku
Iintyatyambo zeDong Tien kwiholide yeTet zimele ulonwabo olungenamda
Iintyatyambo zegerbera zibonisa ulonwabo olungenasiphelo. Ke ngoko, intyatyambo yegerbera yakhethwa njenge Iintyatyambo kwiivazi kwiholide yeTet Sivuyisana ngeziganeko, iintyatyambo zentombi/umfazi wakho kwiziganeko ezikhethekileyo. Isipha sesipha sezandla silulonwabo oludluliswayo, kwaye ubomi buba nentsingiselo ngakumbi.
ULily yintyatyambo entle yeholide kaTet
Unyaka ngamnye ngexesha loNyaka omtsha, iibhasikithi zeenyibiba, iintyatyambo zeenyibiba kwaye ngokukodwa iintyatyambo zeentyatyambo zihlala zikhethwa kuqala kwiintsapho ezininzi kwimihlobiso yasekhaya. ULily nguye iintyatyambo ezintle zeTet Yenza ikhaya lakho libe ntle ngakumbi, yenza umoya weTet ufudumale ngakumbi, kwaye uncede usapho lwakho lonwabe ngakumbi..
Ixabiso leentyatyambo zeTet ngo-2019
Kwimarike kuthengiswa iintlobo ezininzi zezona ntyatyambo zintle zeTet
Zininzi ezithengiswayo kwimarike uhlobo Ezona ntyatyambo zintle zeTet ukuze abathengi babe nokukhetha okuninzi kunye neentlobo ezininzi kunye nemihlobiso ekhangayo. Amaxabiso entyatyambo Tet 2019 Kuxhomekeke kwimozulu, izinambuzane,… Yiza kwiintyatyambo eziNtsha 360 ukuba nazo ixabisoNdibeke ivasi ngeholide yeTetiindidi iintyatyambo Tet cheap Ifikeleleka kakhulu kwaye ineembiza zePhalaenopsis ezisemgangathweni. Ngoyilo lobuchwephesha kunye nobuchule kunye neqela lokuhambisa ngokukhawuleza liya kukwenza waneliseke ngenkonzo yethu.
>>> bona ngakumbi: Eyona ngqayi intle kwaye inobunewunewu yeentyatyambo zeTet
Kuphi ukuthenga iintyatyambo ezintle zeTet?
I-HOA FOOT 360 Joint Stock Company igxile ekuboneleleni ngeentlobo ezahlukeneyo Amalungiselelo eentyatyambo zeTet ezitshiphu kunye neentyatyambo ezizithandayo kwiholide yeTet iintyatyambo zeTet ezitshiphu kwiSixeko saseHo Chi Minh, iintyatyambo zeTet ezitshiphu eHanoi. Siza kukwenza waneliseke ngenkonzo yethu yokuhanjiswa kweentyatyambo yobuchwephesha.
Ifowuni: (08)22 298 398 – 0936652727 – 0977 301 303 – 0933 055 945